Ozi - Emeputara Ngwa ohuru
Military ileghara Mgbaaka
Aerospace Military Ileghara Mgbaaka
Military Capsule ileghara Mgbaaka
Radar ileghara Mgbaaka
Nnukwu Rotary nkwonkwo
Nkwonkwo Rotary Coaxial
Nkwado Rotary Waveguide
Mmiri Slip Mgbaaka
Site Bore ileghara mgbaaka
Servo-usoro Ileghara Mgbaaka
Capsule Ileghara Mgbaaka
High Speed ​​Super Miniature Ileghara Mgbaaka
High Definition ileghara Mgbaaka
Ethernet Ileghara Mgbaaka
Pancake ileghara Mgbaaka
Iche iche Ileghara Mgbaaka
High Speed ​​ileghara Mgbaaka
Medical Ileghara Mgbaaka
Nnukwu Igwu Mgbapu Mgbaaka
Elecrical n'usoro njikọta
Gas Fluid Integrated Slip Mgbaaka
Omenala ileghara Mgbaaka
Ngwaọrụ ụlọ ọrụ
Amalitere Ngwaahịa Ọhụrụ
Tinyere ọchịchọ na-arịwanye elu nke ọtụtụ ọwa vidiyo nkọwapụta mgbapụta vidiyo dị elu na 1080P HD ngwa ọrụ, AOOD mepụtara ụzọ 36 ọhụrụ HD-SDI mgbanaka mgbaaka ADC36-SDI. Ihe nlere a nke nwere mpempe mpụga 22mm na naanị 70mm dị elu, na-enwe ike ịfefe ụzọ 36 nkịtị ihe nrịba ama / ike na ụzọ 1 ụzọ ntụgharị rotary iji nyefee 1080P HD mgbaama. Ọdịdị ya dị iche iche na-enyere ya aka ịdị mfe itinye ya na sistemụ ndị ahịa dị ugbu a iji dochie ihe mgbaaka mbụ ha, ma mee ka usoro ahụ niile kwalite arụmọrụ dị elu. Ọ bụ mgbanaka kacha mma na-ere, onyunyo, mgbasa ozi, TV na ahịa ihe nkiri ugbu a, a na-ejikwa ya na usoro ịwa ahụ ọkụ ọkụ na usoro 1080P HD ndị ọzọ.
Post oge: Jan-11-2020
OLỌ AKW TKWỌ AKWODKWỌ
■ Ike R&D ike
A pụrụ ịdabere na ya a na-agbanwe agbanwe
Delivery Ntinye ngwa ngwa
■ worthytụkwasị obi mgbe ire ere ahịa
Ndị na-ahụ maka ụlọ na-aghọ ahịa kachasị ukwuu nke Robotic nke Mgbaaka Mgbaaka
Na ngwa ngwa robotic, a na-akpọ mgbanaka mgbaaka dị ka mgbatị na-agagharị ma ọ bụ mgbatị robot. A na-eji ya ebufe ihe mgbaàmà na ike site na isi ntọala ya na njikwa njikwa aka robotic. O nwere akụkụ abụọ: otu akụkụ na-anọ ọdụ na-agbakwunye na ogwe aka robot, otu akụkụ na-agbagharị agbatị na-agbatị aka nkwekọrịta robot. Site na nkwonkwo robot, robot nwere ike iru ...
Downhole Drilling ọma jijiji Nguzogide na elu okpomọkụ Ileghara Ri ...
Ngwaọrụ Downhole chọrọ mgbanaka mgbaaka iji nyefee ike na data ma kpochapụ eriri igwe na ịmị ọkụ na gburugburu ebe kachasị egwu. AOOD dị ka onye na-eduzi ndị nrụpụta na onye nrụpụta mgbaaka eletriki eletriki, na-elekwasị anya mgbe niile na nchọta kachasị ọhụrụ nke ngwaọrụ mkpọpu ala maka mgbapụta mgbapụta, ka enyerela nke ọma nnukwu arụmọrụ vi ...
Tinyere ọchịchọ na-arịwanye elu nke ọtụtụ ọwa vidiyo nkọwapụta mgbapụta vidiyo dị elu na 1080P HD ngwa ọrụ, AOOD mepụtara ụzọ 36 ọhụrụ HD-SDI mgbanaka mgbaaka ADC36-SDI. Ihe nlere a nke nwere mpempe mpụga 22mm na naanị 70mm dị elu, na-enwe ike ịfefe ụzọ 36 nkịtị ihe nrịba ama / ike na ụzọ 1 ụzọ ntụgharị rotary iji nyefee 1080P HD mgbaama. Ya kọmpat s ...